गाउँपालिका अध्यक्ष जसले गाउँपालिकाको लागी गाडी किन्न आएको पैसा स्काभेटर र टिपर किनेर जनतालाई सेवा दिए ! - Nepali Sandes
गाउँपालिका अध्यक्ष जसले गाउँपालिकाको लागी गाडी किन्न आएको पैसा स्काभेटर र टिपर किनेर जनतालाई सेवा दिए !
रामेछाप / पोहोरको बर्खामा खिम्ती खोलाको बाढीले सदरमुकाम र राजधानी तथा तराईबाट रामेछापको उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिका जाने सडकमा ठूलो क्षति पुर्यायो । बाटो बगाएपछि उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिका पूरै नाकाबन्दीमा परे । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले ६ महिनाभन्दा पहिले बाटो बनाउन नसकिने बतायो । कसैले बनाउन सकिँदैन भनेको त्यो बाटो उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग सुनुवारलाई साथ लिएर आफैले ढुंगा पल्टाएर एक हप्ताभित्रै खुलाए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाहेमा अहिलेकै अवस्थामा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, शेरबहादुर सुनुवार । नेतृत्वले सान, मान र दाम छाड्नैपर्छ । आफूलाई सर्वसाधारणभन्दा फरक हैन, उनीहरुकै बीचमा राखेर हेर्ने हो भने समुदायलाई धेरै माथि उठाउन सकिन्छ । शेरबहादुरको मन्त्र सबैले ह्रदयंगम गरौं, ‘लालचले आफूलाई त बिगार्छ, बिगार्छ, समाज र देशलाई पनि बिगार्छ ।’(-उज्यलो मिडिया बाट साभार )
Fri-May-2018, 11:05 am मा प्रकाशित, 84 जनाले हेर्नुभयो
विदेश गएकि नेपाली चेलीकाे यस्तो लाजमर्दो हर्कत.. के भन्नुहुन्छ? कृपया भिडियो हेर्नुस्